Sida loo Cabiro ROI ee Ololahaaga Suuqgeynta Fiidiyowga | Martech Zone
Sida loo Cabiro ROI ee Ololayaasha Suuqgeynta Fiidiyowga
Monday, July 23, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Wax soo saarka fiidiyowgu waa mid ka mid ah xeeladaha suuqgeynta ee inta badan lagu qiimeeyo markay tahay ROI. Fiidiyow soo jiidasho leh ayaa ku siin kara awood iyo daacadnimo bini'aadamnimadaada astaan ​​u ah isla markaana ku riixda rajadaada go'aanka iibsiga. Waa kuwan qaar ka mid ah tirakoobyada cajiibka ah ee la xiriira fiidiyaha:
Fiidiyowyada lagu duubay websaydhkaaga waxay sababi karaan 80% koror ah heerarka beddelashada
E-mayllada ay kujiraan fiidiyowgu waxay leeyihiin 96% heer guji ah-ka-sarreeya marka la barbar dhigo emayllada aan fiidiyowga ahayn
Suuqgeeyaasha fiidiyowga waxay helayaan 66% hoggaan tayo leh oo dheeraad ah sanad kasta
Ganacsatada fiidiyowga ayaa ku raaxeysta kordhinta 54% ee wacyigelinta calaamadaha
83% kuwa isticmaala fiidiyowga waxay aaminsan yihiin inay ka helayaan ROI wanaagsan iyada oo 82% aaminsan yihiin inay tahay istiraatiijiyad muhiim ah
Ganacsiyo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah ayaa sii kordhaya iyadoo 55% ay soosaaraan fiidiyoow 12kii bilood ee la soo dhaafay
Hal Soo saar ku diyaariyey faahfaahintan faahfaahsan, Cabbiraadda ROI ee Ololaha Suuqgeynta Fiidiyowga. Waxay faahfaahinaysaa cabirrada ay tahay inaad kormeerto si aad u horumariso suuqgeynta fiidiyowgaaga ROI, oo ay ku jiraan aragtida tir, hawlgelinta, heerka beddelka, wadaagista bulshada, -celin, Iyo wadarta qiimaha.
Infographic wuxuu sidoo kale ka hadlayaa qeybinta fiidiyowga si loo kordhiyo saameynteeda. Waxaan jecelahay inay wadaagaan emaylka iyo saxeexyada iimaylka inay yihiin meelo wanaagsan oo lagu dhiirrigeliyo fiidiyahaaga Ilaha kale ee qaybinta ee xoogaa taabtay waa Youtube iyo ku habboonaynta mashiinka raadinta. Ha iloobin inay jiraan laba istiraatiijiyadood oo saameyn ku yeelan kara raadinta markaad wax ku suuq geynayso fiidiyow:
Raadinta Fiidiyowga - Youtube waa mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn waxaadna toosinkartaa taraafikada badan astaantaada ama degitaanka bogagga si loogu beddelo. Waxay ubaahantahay xoogaa ku habboonaanta qoraalkaaga fiidiyowga Youtube, in kastoo. Shirkado badan ayaa tan seegay!
Darajada Mawduuca - Boggaaga, ku darista fiidiyowga sifiican loo habeeyay, maqaal faahfaahsan ayaa si weyn u wanaajin kara fursadahaaga darajo, wadaag, iyo tixraac.
Waa kuwan faahfaahinta buuxda oo leh macluumaad weyn!
Tags: heerka beddelkaemaylka fiidiyowgahawlgelintacabirrada fiidiyowga ee muhiimka ahsida loocabir roiROIkharashka fiidiyowgavideo qaybintaemaylka fiidiyowga ahjawaab celin video ahsuuqgeynta fiidiyowgaololaha suuqgeynta fiidiyowgacabirrada fiidiyowgaqorsheynta fiidiyowgafiidiyaha videowadaaga videosaxiixa videotirakoobka fiidiyowgaaragtida tiryoutube
Onomies Lexical: Micnaha, Antonymy, Hyponymy, Meronymy, Holonymy